Siyaasadda daryeelka iyo badbaadada bulshada oo la saluugay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Siyaasadda daryeelka iyo badbaadada bulshada oo la saluugay
La daabacay måndag 16 september 2013 kl 14.34
Dadweynaha iswiidhishka ee codka bixiya ayaa gacanta ku sayriyey siyaasadda dowladda ee ku saabsan daryeelka iyo badbaadada bulshada. Sidaasna waxaa lagu muujiyey daraasad ay shirkadda Novus u sameysey idaacadda telefishanka ee SVT.
Su’aashii la weyddiiyey ayaa ahayd haddii ay u arkaan in daryeelka bulshadu ka soo wanaagsanaadey ama ka soo daray intii ka dambeysey doorashadii hore ee 2010.
Dhanka daryeelka bukaanka waxay boqolkiiba 60 ku jawaabeen in xaaladdu ka soo xumaatay ama aad uga soo xumaatay. Tiro intaas le’eg ayaa jawaab taas la mid ah ka bixiyey hawlaha badbaadada bulshada, sida gunnada shaqa-la’aanta iyo kaalmada dadka aan wax dakhli ahi soo gelin. Kolkii wax laga weyddiiyey waxbarashada dugsiyada, boqolkiiba 57 waxay ku jawaabeen in ay ka soo xumaatay ama aad uga soo xumaatay.
Xataa tirada dadka taabacsan xisbiga Mooderaatka oo qaba in xaaladdu ka soo xumaatay ayaa ka badan tirada qabta in xaaladdu ka soo wanaagsanaatay mar wax laga weyddiiyey hawlaha waxqabadka dugsiyada, rugaha daryeelka caafimaadka iyo gargaarka bulshada. Mar dadka xisbiga Mooderaatka taabacsan wax laga weyddiiyey hawlaha daryeelka bukaanka, waxay boqolkiiba 28 ku jawaabeen in xaaladdoodu ka soo xumaatay, meesha boqolkiiba 16 ay qabaan in ay xaaladdu sii wanaagsanaatay.